Intlanzi yaseMarlin (i-weevil exhontiweyo): iimpawu, indawo yokuhlala, ukutya kunye nokunye! | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngeentlobo zeentlanzi ezizodwa ezinokuhlala kwindalo yolwandle nakumanzi amnandi. Malunga nayo intlanzi yenaliti. Kukwaziwa njengegama lepipefish. Yeyosapho lwe-belonidae kwaye igama layo lenzululwazi ngu Weevil ebotshiwe. Kolu sapho zonke iintlanzi zibonakaliswa ikakhulu ngokuba nomzimba omde kunye nemihlathi eyandisiweyo enomlomo omde ogcwele amazinyo abukhali ngokupheleleyo.
Kule nqaku uya kuba nakho ukwazi ngokunzulu yonke into malunga ne-marlin. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo? Kufuneka uqhubeke ufunda.
2 Uluhlu kunye nendawo yokuhlala kwelefishfish
3 Ukutya kwePipefish kunye nokuzala kwakhona
4 Ukuloba iMarlin
Ezi ntlanzi zinemizimba emide kwaye zinempumlo ebekwe kumthombo wangaphakathi wamehlo abo. Inamaphiko amafutshane emiphunga xa ithelekiswa nezinye iintlanzi kwaye omabini amaphiko omqolo kunye nawempundu ngasemva kwindawo yesisu.
Inomgca othe ngqo ohamba ngawo wonke umzimba wayo kwindawo yangaphakathi. Lo mgca uqala kwi-pectoral fin kwaye unesikali esincinci. Ngempembelelo encinci okanye ngesantya emanzini banokuzibamba. Zizilwanyana ezihlala kufutshane nomphezulu wamanzi. Ngenxa yoku, baneklorin efanayo nendawo yokuhlala apho bahlala khona. Oko kukuthi, iintlanzi zinombala oluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu kwaye zimhlophe emazantsi. Umgca othe ngqo esixoxe ngawo unombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Incam yomhlathi osezantsi, kwiimeko ezininzi, yinxalenye yenyama yeorenji okanye ebomvu. Enkosi ngomlomo wabo bayakwazi ukubamba elinye ixhoba ngokukhawuleza.
Uninzi lwehlabathi, iindawo zokuloba eziselwandle zinomdla omkhulu kwezorhwebo. Babanjwa besebenzisa indlela yokuloba, apho iisampulu zibambeke kwiminatha. Kuqwalaselwa njengobumnandi obumnandi kumxholo wayo wesondlo. Kukwakho nabantu abayiphephayo kuba iphezulu kumathambo amancinci, aluhlaza.
Uluhlu kunye nendawo yokuhlala kwelefishfish
Ezi ntlanzi zinoluhlu lwazo olwandayo ngaphesheya kweAtlantic kunye nenxalenye yoLwandle lweMeditera. Ngokubanzi, bayasuka elunxwemeni kungekude imigama emide kwaye babuye xa amaqondo obushushu enyuka ehlotyeni nasentwasahlobo.
Ngalo lonke ixesha lasebusika bafudukela emanzini anzulu kude nonxweme. Iinqanawa zibaleka ngokulula kwezi ndawo ukuba awuthathi manyathelo okuphepha. Nangona kunjalo, ngexesha lasehlotyeni, ukubanjwa kwabo kulula kakhulu kuba beqhubela phambili elunxwemeni.
Ngokukhethekileyo, indawo yayo yendalo isemanzini anzulu. Yile nto sinokuthi siyithathe njengeyona ndawo yayo yophuhliso. Ezi ntlanzi, xa zidada kwizikolo zentlanzi yenaliti, zivelisa ukuqhuma emanzini ekulula kakhulu ukuba kubonwe ngabalobi abanezakhono. Kwaye yile morphology inomdla yale ntlanzi ayiyi kuqatshelwa xa ivelisa imisinga ngokuhamba kwezikolo zentlanzi.
Ukuba intlanzi iyatsiba phezu kwamanzi kulula ngakumbi ukwahlula umhlathana we -fishfish. Kulula ukuzifumana zombini kwiindawo zolwandle kunye nasemachwebeni.
Ukutya kwePipefish kunye nokuzala kwakhona
Umbhobho yintlanzi edla okona kutya kunye nokutya okuncinci kukuncinci kwee-anchovies kunye neesardadi. Ezi ntlanzi zinobuchule bokuzingela obulungiselelwe zona ezinokubambisa kuzo ngokungathi zizilwanyana zasendle.
Ngaphandle kwee-anchovies zabantwana, bakwatya nezinye izilwanyana ezinje ngee-crustaceans, iimollusk kunye nezinye iintlanzi ezincinci. Nangona kunjalo, ezokuqala zizinto azithandayo, ngaphandle kwamathandabuzo. Ukuloba i-marlin kulula kakhulu ukuba uyiloba kwinto enokuba kukutya kwayo kwendalo.
Ngokuphathelene nokuzala kwakhona, i-needlefish ikhupha amaqanda ayo kumanzi anzulu apho kukho ubukho obukhulu be-algae apho banokuthi babambelele khona. Amaqanda ziimilimitha ezi-3 kuphela ububanzi kwaye zibekwe kwi-algae enkosi kwinto evumela ukuba inamathele kwaye ingalahleki. Yile ndlela abasinda ngayo bencamathele kude kube ngumzuzu abawuqanduselayo.
I-Marlin hatchlings ayinayo i-bony beak njengabantu abadala. Njengoko bekhula, bayakhula. Bafikelela ekuvuthweni xa bekwazi ukuzingela bodwa besebenzisa umlomo wabo wamathambo ogcwele amazinyo abukhali.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, abantu abaninzi bayathanda ukutya i-marlin ngencasa yayo emnandi. Ngesi sizathu, kukho abalobi abazinikele ngokupheleleyo ekulobeni le mizekelo. Ngokucacileyo, umlobi ngamnye akanakho ukusebenzisa indlela efanayo yokuloba njengesikhephe. Basebenzisa ii-trawls ezithe nkqo abaziphosa elwandle ukujikeleza izikolo zeenalfish.
Ezi bhanki ziyaphazamiseka xa ziziva zijikeleziwe. Xa bebaleka bavaleleke kwiminatha kwaye le yindlela ababanjwa ngayo. Eyona minatha isetyenziswa kakhulu zii purse seine. Olu hlobo lweminatha lusetyenziselwa ukuhamba kwizikhephe ezixineneyo kwaye ukuloba kunesiphumo esihle.
Ukuloba kunokwenziwa kusetyenziswa i-phytora enamazinyo aliqela. Okuloba kusetyenziswa ebusuku kwaye kuzanywa ukutsala iintlanzi ngohlobo lokukhanya. Yile ndlela kunokwenzeka ngayo ukuba uqokelele inani elikhulu leentlanzi ukuze ubambise ngaphezulu kwazo.
Ukupheka le ntlanzi kufuneka uqale wazi izinto ezimbalwa. Ukulungiswa kwayo kulula kakhulu kuba inameva ambalwa. Amaxabiso aphakathi kwe-10 ukuya kwi-15 ye-euros ngekhilo, ke yinto enokuvunyelwa kuphela kwezinye iimeko okanye kubantu abazizityebi.
Ukucoceka kunye nokugcwalisa kufuneka sivumelane ne-physiognomy yentlanzi. Yiyo kuphela into enokuba nzima ngakumbi. Izitya zenaliti eziqhotsiweyo okanye eziqhotsiweyo zinokulungiswa. Gcina ukhumbula ukuba iintlanzi zincinci kancinci kuneesardadi, kodwa inyama yazo iyafana.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi ngale ntlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yaseMarlin (Hook weevil)
Iiplanga zokuloba iintlanzi